Daryeel caafimaadkaaga maskaxda iyo wanaagqabkaaga marka aad guriga joogto | Mental Health Foundation
Daryeel caafimaadkaaga maskaxda iyo wanaagqabkaaga marka aad guriga joogto
1. Qorshayso maalintaada
Waxaan dhammaanteen la qabsanaynaa habnololeed, cusub, oo lala yaabi karo. Waxay tani halis gelin kartaa wanaagqabkeena maskaxda.
Si kastoo aan ugu damci karno in aan maalintoo dhan ku joogno dharka hurdada, haddana hawlaha caadiga ah ayaa daruuri u ah aqoonsigeena, isku kalsoonideena iyo macnaheena.
Isku day in aad maalintaada u kacdo qiyaas ahaan isla saacadda caadiga kuu ah oo isku wad in aad maalin kaste waqti u qoondayso dhaqdhaqaaqa, is dabcinta, xiriirrada iyo fikirka.
2. Maalin walba dhaqdhaqaaqa kordhi
Firfircooni samayntu waxay yaraysaa diiqada, waxay kordhisaa tamarta jirka, waxay noo kordhin kartaa digtoonaanta waxayna naga caawisaa in aan si ka fiican u seexanno.
Raadi habab kaladuwan oo aad maalintaada ugu dari karto dhaqdhaqaajinta jirka iyo firfircoonida oo soo hel qaar adiga faa'iidada ugu fiican kuu leh.
Xataa guriga dhexdiisa, waxaa jira habab farabadan oo aad jimicsi ku samayn karto oo aad dhaqdhaqaaqa ugu wadi karto jirkaaga.
3. Isku tijaabi farsamo is dabcin
Is dabcinta iyo diirad saarista waqtiga xaadirka ah ayaad ku wanaajin kartaa caafimaadkaaga maskaxda waxayna fududayn kartaa dareennada xun.
Isku tijaabi jimicsiyo khilaawo ama isku fikir ama neefsasho oo kaladuwan si aad u aragto waxa ku caawinaya. Tusaale ahaan, mararka qaar waxaa na geli karta giigsanaan aad u badan oo noo diidi karta xataa in aan xasuusanno sida uu dareenka dabacsanaantu u eeg yahay. Dabcinta muruqyada ee tartiib tartiibta ah ayaa ku baraysa in aad garato marka aad is giijinayso iyo sida aad isku dabcin karto.
4. Dadka kale la xiriir
Guri joogga, gaar ahaan marka aad kelidaa meel ku nooshahay, waxaad ka dareemi kartaa keli ahaan ama cidla. Soo hel habab hal abuur leh oo aad kula sii xiriirto dadka aad wada shaqaysaan, saaxiibbada, qoyska, iyo dadka kale si ay kuwaasi adiga (iyo iyaga) idiin dareensiiyaan in aad xiriir iyo taageero dheeraad ah leedihiin.
Raadi habab aad ku wada xiriirtaan oo adiga kuu fudud, haddii ay tahay dhanka boostada, telefoonka, baraha bulsheed, ama ku sheekaysiga fiidiyowga. Wax kaste ayay tani noqon kartaa, laga bilaabo shaah ku wada cabbidda fiidiyowga, wada ciyaaridda ciyaar internet ku jirta, ama dirista uun farriin qoraal ah ee telefoonka gacanta oo taageero lagu bixiyo.
5. Waqti u qaado si aad u fikirto oo naxariis isku muuji
Maalin walba waqti u qoondee si aad uga fikirto waxa si fiican u dhacay. Waxaa muhiim ah in aad garato guulahaaga iyo waxyaabaha aad ka mahadnaqayso, si kaste ha u yaraadaane. Ku fikir in aad maalin kaste haysato buug xasuusqor oo mahadnaqa loogu talagalay halkaasoo aad ku qori karto labo ama saddex waxyaabahan ka mid ah habeen walba ka hor inta aadan hurdo tagin.
Farsamooyinka maan ku fikirka ayaa weliba kaa caawin kara in aad diiradda saarto waqtiga xaadirka ah halkii aad iskaga mashquulin lahayd afkaarta aanan faa'iido lahayn (inkastoo aanay faa'iido u lahayn dadka ku jira niyadjabka ka daran).
6. Hurdadaada wanaaji
Dareennada shakiga iyo isbeddellada nolol maalmeedka ayaa kuu keeni kara in ay hurdadu kugu sii adkaato.
Wax badan ayaad samayn kartaa si aad u wanaajiso hurdadaada. Ku talagal in aad hurdo tagto oo aad hurdada ka kacdo saacad aanan is bedbeddelayn maalin kaste, xataa maalmaha wiikeendiga haddii aad karayso, oo isku day in uu kuu soo galo iftiinka dabiiciga ah ee cadceeddu (adigoo daahyada iyo daaqadaha furanaya) marka ay suurogal tahay. Waxay tani kaa caawinaysaa in aad nidaamiso saacadda dabiiciga ah ee jirkaaga taasoo kaa caawin karta in aad si ka fiican u seexato.
Jirkaaga deji hurdada ka hor adigoo iska ilaalinaya in aad isticmaasho telefoonkaaga, kumbiyuutarkaaga yar ee tablet la yiraahdo, kumbiyuutarkaaga caadiga ah ama telefishinkaaga hal saacad ka hor waqtiga hurdada.
Tilmaamo iyo fikrado kale waxaa laga heli karaa barta internetka Clear Your Head (Madaxaaga Faaruqi) ee Dawladda Skotland.